‘Kufanele sikhumbule ukuthi noma sekunezihlobo zethu esezihambile, kodwa singaphila ngokuzithemba noma ngabe uphila noma awuphili nalo,’ kusho uBatembu.
Umcimbi uvulwe ngomthandazo wenkumbulo kanye nenkulumo kaSolwazi wezocwaningo ngesifo sengculazi nesandulela ngculazi, uThumbi Ndung’u, ophinde abe nguMqondisi weHIV Pathogenesis Programme (HPP) ngaphansi kwesikole sobudokotela e-UKZN.
Ukhulume ngezindlela ezintsha zokuvikela lesifo nangezinto ezithusayo ngesimo sengculazi nesandulela ngculazi emphakathini.
‘Abantu abasha bangakuvimba ukwanda kwalesifo ngokusebenzisa izivikelo esezikhona. Bangenza nocwaningo ukuze bazame ukuqhamuka namasu amasha okulwa nalesifo,’ kusho uNdung’u.
Abesigungu esimele abafundi kanye nezinye izimenywa banikezwe umentshisi umuntu eyedwa ukuze bakhanyise ikhandlela lomuntu oseduze kwakhe. Kuqhubeke kwaze wonke umuntu wakhanyiselwa ikhandlela obekuchaza ukubambisana ekulweni nalesifo.
‘Sidinga ukubambisana ukuze sivikele ukutheleleka okusha, ukubandlululeka, nokushona kwabantu ngenxa yengculazi nesandulela ngculazi,’ kusho uBatembu.